Article submitted by: minkyaw thuyein on 27-Apr-2013
ပြည်လုံးကျွတ်- ပြည်သူ.ဆန္ဒ ခံယူကြရအောင် လ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်လုံးကျွတ် ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲတွေ ကျင်းပပြီးဖြစ်စေ ၊ အနောက်ဖက်( ဥရောပ) လက်နက်နဲ့.လား၊ စီးပွားရေးနဲ့လား ချိန်းချောက် အကြပ်ကိုင်လို.ဖြစ်စေ ၊ ပြောခြင်သလိုသာပြောကြတော့ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်
ကိုတော့ ပြန်ရောက် နေတာတော့ တွေရတယ် ။ ဒီမိုကရေစီဟာဘယ်လောက် စစ်မှန်တယ် မစစ်မှန်ဘူး၊ စည်းကမ်းရှိတယ် မရှိဘူး ဆိုတာတော့ ကိုယ်လဲ
တချိန်က ဒိမိုကရက်တစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ အမြစ်မတွယ်ခဲ့လို ပျောက်
ကွယ်လုခမန်းဖြစ်ခဲ့ရတယ် ဒီမိုကရေစီးကို မလိုလားသူတွေ အပိုင်းပိုငးမှာ အထင်အရှားရှိနေခဲ့တယ်၊ ဒီမိုကရေစီ မလိုလားသူတချို.က ဆိုရင် လက်နက်
စွဲကိုင်ပြီး ကျန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကို ကြုံရတယ်။ အခုထိလဲ တချို.က
လက်နက်နဲ့ချိန်း ချောက်နေတုန်းဘဲရှိတာကို တွေ.ရတယ် ။
ဒါကြောင့် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေါင်းဆောင်တွေ အဖြေရှာမရတဲ့ ပြသနာတွေကို အျိခန်ကုန် လူပန်း သက်သာအောင် လူထုနည်း ၊ ဒီမိုကရေစီ နည်း စံနစ်အရ ပြည်လုံးကျွှတ် ပြည်သူ.ဆန္ဒခံယူပြီး ပြည်သူ.အဆုံးအဖြစ်ကိူ ခံယူကြဘို. လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ် ။
ဒီအဆုံးအဖြတ်ပေါ်မှာ တည်ပြီး အစိုးရဟာ ပြတ်ပြတ်သားသားဆောင်ရွက် ရလိမ့်မယ်။ပြည်လုံးကျွတ်- ပြည်သူ.ဆန္ဒ ခံယူကြရအောင် ဆိုတာဟာ ဥပမာအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာ ၊ကချင်ပြသနာ ဆိုတာတွေကို ပြည်သူ အဆုံးအဖြတ်ခံယူဘို.လိုလိမ့်မယ် ထင်တယ် ။
လူအများကောင်းစားရေးဝါဒ လို.ဘဲ ပြောပြော ၊ ဒီမိုကရေစီလို.ဘဲ ဆိုဆို. လူတစုကောင်းစားရေး ၊ လူတစု ရဲ့ အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရေးကို လူတစုထဲ ၊ တယောက်ထဲက လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်လို.မရဘူး၊ လူအများအတွက် လူအများ
က ၀ိုင်းဝန်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ နေရာမှာ ငါ့အတွက် ၊သူ.အတွက် ၊ သူသူ ငါငါ ခွဲခြားနေလို.တော့လဲ မဖြစ်သေးဘူး ထင်တယ်။
ဘယ်လိုဘဲ ပြည်သူ.ဆန္ဒခံ ယူယူ ၊ ထောက်ခံသူ ကန်.ကွက်သူ ဆိုတာတော့ ရှိမှာဘဲ။ ထောက်ခံမဲ အနဲအများဟာ ဒီမိုကရေစီဘဲလို. ယေဘံယျအားဖြင်.နားလည်ထားတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက် မဟုတ်၊ ကိုယ်ဘက် မလိုက် ကိုယ် အသာမရတာဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘူး တရားမျှတမှု မရှိဘူးတဲ့.လား ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးစုံ ၊ ဘာသာစုံ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အတွက် ဘာသာခွဲခြားရေး လူမျိုးခွဲခြားရေး ပပျောက်ဘို. လိုနေပြီ။ ဘာသာကွဲပြားမှု လူမျိုးကွဲပြားမှူတွေ
ကြောင့် လူတွေအားလုံးကို အန္တရာယ်ဖြစ်လာ နေစေရင်၊ ဘာသာခွဲခြားမှု လူမျိုးခွဲ့ခြားမှု ကို ဖြစ်တဲ့နည်း တနည်းနည်းနဲ့ ပပျောက်အောင်လဲ ၀ိုင်းလုပ်ြက
ရ လိမ့်မယ်။ ဘာသာကွဲ လူမျိုးကွဲ သဘောထားအယူအဆ အမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကုဌနူနာသယ် ဘ၀ ထပ်ရောက်ရတာမျိုးတော့ မဖြစ်စေသင့်
ဒီမိုကရေစီကိုလူအမျိုးမျိုးက အဓိပါယ် အမျိုးမျိုးဖေါ်နေ ကြတယ် ။ ဒီမိုကရေစီ
ဆိုတာဟာ ဘယ်က ဘယ်သူတွေက စတင်လာတယ် ဆိုတာကိုလဲထင်မြင်ယူဆ
ချက် မှန်းဆချက်အမျိုးမျိုး ရှိနေတာကို တွေ.ရ တယ်။
စကား မဟုတ်တာကို စကားလုပ်ပြောရရင်. ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အနောက်ဖက်
က တင်သွင်းတာပါ ဆိုတော့ သဘောမတူဘူးတဲ့ ၊ ပြောသူကပြောလာတယ် ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့.အနောက်ဖက်မှာတည်ရှိ တယ် ၊ ကျေးရွာ တခုက ရွာသူကြီးရွေးတာကို ဒိုမိုကရေစီနဲ့ နိုင်းလို.တော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်
ပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ.နိုင်းလို.မတန်တဆတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် ။
ဂေါတမဗုဒ္ဒဟာ ကုလားဖြစ်နဲ့ အတွက်. ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ဗမာတွေဟာ ကုလားတွေဘဲ လို.ပြောသူကလဲ ပြောလိမ့်မယ်။ မြန်မာ အစ တကောင်းက ဆိုတဲ့ သာကီဝင်မင်း အဘိရာဇာ ၀င်ရောက်ခြင်း ဆိုတာ လူမျိုးနဲ့ ပါတ်သက်
သလား အဘိရာဇာ မ၀င်ခင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ တွေ မရြှိက မနေကြ လို.လား၊ တောတောင်တွေ သားရဲတိရိစ္ဆာန်တွေန.ဘဲ ပြည့်နေလို.လား ? ၁၈၈၆ က အင်္ဂလိပ် သိမ်း တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၃၅ ထိ ကုလားပြည်(အိန္ဒိယပြည်) ရဲ. နယ်မြေ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အတင်း အဓမ္မ သွတ်သွင်း သတ်မှတ်ခံရလို. မြန်မာဆိုတဲ့ လူမျိုးတုန်းပြီး အားလုံး ကုလားတေ၊ွ တရုတ်တွေ၊ သွေးရော ကပြားတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ် ဆိုရင် မှန်မလား ? ကပြားဆိုတာ အင်္ဂလိပ်နဲ့မိတ်လိုက်လို. ပေါက်လာတဲ့ သားပေါက် ကိုဘဲ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ဘူး လို.မှတ်သားးရဘူးတယ် ။
ကမ္ဘာကြီးပေါ် မှာ လူတွေဟာ တရားမျှတဘို.၊ လွတ်လပ်ဘို.၊ ငြိမ်းချမ်းဘို.၊ ခွင့်တူညီမျှဘို. အာချောက် အောင်၊ လည်ချောင်းကွဲ အောင် ဟြေနေ ဟောနေကြတာဟာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တရားမျှတခြင်း ၊ လွတ်လပ် ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ခွင့်တူညီမျှခြင်းတွေ မရှိလို.ဘဲ ဆိုတာ ကို ထင်ရှားစွာဖေါ်ပြနေ
ဒါဖြင့်ရင် ဘယ်လူသားတွေက ဘယ်လူသားတွေအပေါ် တရားမျှတမှု မရှိ၊ ချုပ်ချယ်ခြင်း ၊ ဆူပူမှုတွေ ဖန်တည်းခြင်း အားပေးအားမြောက်ပြုခြင်း၊ ။ သာတူညီမှ မဟုတ်တဲ့ ခွဲခြားစွာဆက်ဆံခြင်းတွေ ကို လုပ်နေကြသလဲ။ မြန်မာ စကားမှာ “ ကိုယ်ထင်ရင် ကုတင် ရွှေနန်း။ ပုဂိုလ် ခင်မှ တရားမင်” ဆိုတာ ရှိတယ်။ ရှင်းနေတာဘဲ ။ တရားတာ မတရားတာ၊ လွတ်လပ်တာ မလွတ်လပ်
တာ။ ငြိမ်းချမ်းတာ ဆူပူတာတွေ၊ ညီမျှတာ မညီမျှတာတွေနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး
ဆိုတာဘဲ ။ ကိုယ်ကြိုက်ရင် ကိုယ်လက်ခံရင် သူတပါးအတွက် ဂရုစိုက်မတဲ့
မတူကြတဲ့ လူအမျိုးမျိုး ၊ ဘာသာအယူအဆအမျိုးမျိုး ကြားမှာ အယူအဆ အမျိုးမျိုး ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုး ဆိုတာတွေကတော့ ရှိမှာဘဲ ။ရှိတာကို သိပါရက်နဲ့ တော့ ပြသနာလုပ်နေလို.လဲ မဖြစ်ဘူး။ ညှိ ယူလို.ရတာ တွေ ရှိမယ် ၊ မရတာတွေရှိမယ်။ အားလုံးကို တပြေးတည်းညီ ဖြစ်စေဘို. ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက် လက်တွေ.မပါတဲ့ သဘောတရားတွေ ဖြစ်တယ်။
အသိတရားတခုထဲ အကြောက်တရားတခုထဲနဲ့ပ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို.မရဘူးနိုင်ဘူး၊ ဒါတွေဟာ လူသဘာဝ တွေ ၊ ဒီသဘာဝကိုပြောင်းလဲအောင် လုပ်ဘို.ဆိုတာ လွယ် မယောင်နဲ့ ခက်တယ် ။ ဖိလေကြွလေ ၊ အမြစ် ပြုတ်အောင် လုပ်ဘို.ဆိုတာတော့ မစဉ်းစားနဲ့။ ရေ မြေ လေ မီး ဓါတ်ကြီး အစုမပါဘဲ ဘာမှ မတည်နိုင်ဘူး။ လေ မြေ လေ မီး တို. မျှတရမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ဘူးသလဲ ? ၁၉၄၈ ခုနှစ်က နောက်ဆုံး လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ တယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေး ။ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်မှုဆိုတာတွေဟာ အဓိပါယ်ရှိရဲ.လား အနှစ်သာရ ရှိရဲ့လား? ဒီမေးခွန်း ပုစ္ဆာ ဟာလဲ အဖြေရှာမရတဲ့ ပဟေဠိ ဘဲ ဖြစ်နေတယ်၊ အယူအဆအမျိုးမျိုး ဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ဘူး ။ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံဟာ မြန်မာနိုင်ငံ
တခုထဲ မဟုတ်ဘူး။ တချို.နိုင်ငံတွေဆိုရင် ကမ္ဘာ. နိင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ကျော်က လူမျိုးတွေ ဘာသာတွေ နဲ့ ပြည်.နေတယ်လို.သိရတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒါလောက် လူမျိူးမစုံသေး
ပါဘူး ။ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံလို. ပဋိပက္ခ များတာမဟုတ် ။ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာကို ခုတုန်းလုပ်နေတဲ့ ပဋိုပက္ခ ဖန်တီးလိုသူ လူယုတ်မာတွေကြောင့်ဖြစနေရတာဘဲ လို.ပြောရင်လုံးဝမှန်ကန်လိမ့်မယ် ။
မြန်မာတွေဟာ ကိုယ်လူမျိုး၊ ကိုယ့်နိင်ငံအကြောင်း ဘယ်လောက် ကြေကြေညက်ညက်သိကြသလဲ ၊ သူများ လူမျိုး သူများနိုင်ငံအကြောင်းရော ဘယ်လောက်သိကြသလဲ ၊ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးတဲ့လား ။ ဘယ်နိ်င်ငံမှ ရွှေဘုံနန်း ကြငန်းမဟုတ်ဘူး ။ နတ်ဘုံ နတ်နန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆိုတာတော သိကြဘို.ကောင်းတယ်။ ဒါကို သိသူသိကြပါလိမ့်မယ် မသိသူက ပိုများလိမ်.မယ်။
ဘယ်နိုင်ငံမဆို “မျက်နှာမှာသနပ်ခါး ပေါင်မှာ သေးစီးချောင်း ” ချည်းဘဲ လို.ဆိုခြင်တယ်၊ ဖုံးလို.ရတာကို ဖုံးတယ်၊ ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းတာ လူသိမှာကို စိုးရိမ်ကြတယ်၊ သူများမကောင်းတာ ကို ဖေါ်ထုတ်ကြတာ လူ.သဘာဝလား ၊ မြန်မာ့ သတ္တိလား? ပွင့််လင်း ၀ါဒနဲ.သူတော်စင် ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ ၊ တကယ်ဘဲ ရှိသလား?
ဒီနေ. ဆွေးနွေးတာက ၊ ပြည်လုံးကျွတ်- ပြည်သူ.ဆန္ဒ ခံယူကြရအောင်လေ ၊ ဒီမိုကရေစီကြရအောင်လေ ၊ ဘယ်လိုသဘောရသလဲ။ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဘာလဲ သိရင် ပြောပြ ပါ ။
နောက်တော့ ဆွေးနွေးကြ အုံးမယ်လေ ၊ ပျော်ပျော် ပါးပါး ပေါ့ ။